सरकार र आमरण अनसनरत डा. केसीका प्रतिनिधिबीचको वार्ता निश्कर्ष बिहिन
काठमाडौं : सरकार र आमरण अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीका प्रतिनिधिबीचको वार्ता निश्कर्ष बिहिन भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयमा आज भएको वार्तामा दुवै पक्षले आ-आफ्नो अडान नछोडे पछि वार्ता विना निष्कर्ष टुङ्गिएको हो ।
डाक्टर केसीका प्रतिनिधिहरुले चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता नभएसम्म केसी काठमाडौं नफर्कने अडान राखेका थिए । केसी पक्षका डा. अविषेकराज सिहंले सरकार गम्भीर नभएका कारण वार्ता सफल हुन नसकेको आरोप लगाएका छन् ।
सरकारले केसीलाई सत्याग्रहीको रुपमा स्वीकार नगरी एक विरामीको रुपमा मात्र लिएका कारण वार्ता सफल हुन नसकेको सिंहको भनाई छ । सरकारी पक्षले केसीको स्वास्थ्य अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै काठमाडौं ल्याउन आग्रह गरे पनि केसीका प्रतिनिधिले भने संसदमा दर्ता भएको विधेयक फिर्ता नभएसम्म काठमाडौं नफर्कने अडान राखेका थिए ।
डाक्टर केसी १८ दिनदेखि जुम्लामा अनसनरत छन् । सरकारको तर्फबाट शिक्षा सचिव खगराज बरालको नेतृत्वमा गृह तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिवसहितको वार्ता टोली र केसीका तर्फबाट अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, ओमप्रकास अर्याल र डा. अभिषेकराज सिंहबीच वार्ता भएको थियो ।।